Maareeyaha Fadhigiisu Yahay London Ayaa Ujeedkiisu Yahay Abuuritaanka Sanduuqa Xashiishadda Ugu Weyn Yurub • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Maareeyaha fadhigiisu yahay London ayaa raba inuu aasaaso sanduuqa xashiishadda ee ugu weyn Yurub
maqaal by daroogada 28 September 2020
Suuqa maalgashiga xashiishka yar ee yurub wuxuu muujinayaa astaamo nololeed, iyadoo shirkad maalgashi oo fadhigeedu yahay London ay bartilmaameedsatay shakhsiyaadka hodanka ah ee rajaynaya inay soo ururiyaan sanduuqa ugu weyn ee gobolka.
1 Istaraatiijiyadda sanduuqan xashiishadda cusub
2 Waxqabadka xashiishadda & lacagta cbd
Sida laga soo xigtay kooxda xogta ee ETFGI, Waqooyiga Ameerika waxay ku badan tahay maalgashiga xashiishadda, iyadoo 12 ka mid ah 14 ka mid ah XNUMX-ka doollar ee xashiishadda diiradda saarey ay ku taxan yihiin adduunka oo dhan. Soo noqoshada badiyaa waxay ahayd mid liidata.
Laakiin Wada-hawlgalayaasha Chrystal Capital Partners waxay rumeysan yihiin in mowjado sii kordhaya oo sharciyeyn ah ay kordhin doonaan caannimada maal-gashiga xashiishka iyo dib-u-soo-noqoshadeeda. Waxay rajeyneysaa inay soo uruuriso $ 100 milyan oo bilow ah oo loogu talagalay Verdite Capital Fund, oo ah sanduuq firfircoon oo la maareeyay oo la bilaabay Isniinta, ka hor inta aan loo ballaarin illaa $ 200 milyan iyada oo loo marayo lacag ururin dambe.
"Waxaan rumeysanahay in tani ay noqon doonto warshad si heer sare ah loo nidaamiyay 10 sano gudahood," ayuu yiri Kingsley Wilson, oo ah shirkad maalgashi la leh shirkada oo aqoonsatay in qatarta sharciyeed ay ka hor istaagtay shirkado badan oo maalgashi gaar loo leeyahay iyo maalgashi hay'adeed. "Nidaaminta iyo maalgelinta waxay taageeri doontaa kala-guurka suuqa waxayna keeni doontaa ka-wareegga sharci-darrada ah loona wareejiyo suuq sharci ah."
Istaraatiijiyadda sanduuqan xashiishadda cusub
Istaraatiijiyadda Chrystal waxay diiradda saari doontaa marijuana-caafimaad, dawooyinka xashiishadda laga keeno iyo waxa loogu yeero CBD - cannabinoid oo aan ka helin isticmaaleyaasha sare. Qiyaastii kala badh hantideeda ayaa lagu maalgelin doonaa Waqooyiga Ameerika iyo ugu yaraan 35 boqolkiiba Yurub. Waxay ka fogaan doontaa shirkadaha siiya marijuana si loogu isticmaalo madadaalada.
Maamulayaasha waaweyn ee maaliyaddu guud ahaan way ka fogaadaan maalgashiga xashiishka. Qoraalka cilmi baarista ee bisha Juun, bangiga maalgashiga Jefferies wuxuu sheegay in hay'adaha ay xisaabiyeen kaliya 5 boqolkiiba lahaanshaha shirkadaha xashiishadda, marka la barbardhigo boqolkiiba 50 qaybta tikniyoolajiyadda.
Dadaallada lacag-ururinta ee Chrystal, oo bartilmaameedsanaya maal-gashadayaasha, oo ay ku jiraan shakhsiyaad qiimo sare leh iyo xafiisyada qoysaska, ayaa ka dhigi doona faylalka ugu weyn ee warshadaha xashiishadda ee ka baxsan Waqooyiga Ameerika. Suuqa waxaa ku badan shirkadaha maalgashiga sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'Privateer Holdings', 'Gotham Green', iyo 'Merida Capital Partners', iyo sidoo kale ganacsato waaweyn oo si guud loo iib geeyay oo ay ka mid yihiin $ 510 million ETFMG Alternative Harvest fund iyo $ 250 million Horizons Marijuana Life Sciences fund.
Waxqabadka xashiishadda & lacagta cbd
Waxqabadka wuxuu ahaa mid jilicsan. Sanadkii la soo dhaafay, saamiyada shirkadaha xashiishka ee Waqooyiga Ameerika ayaa hoos u dhacay ka dib markii ay adkaatay in macaamiisha laga jiido suuqyada sharci darrada ah iyo xawaaraha sharciyeynta ee Mareykanka ayaa ka hooseeyay rajadii laga qabay. Sanduuqa 'Horizons fund' ayaa hoos u dhacay 39 boqolkiiba sanadkii hore iyo 31 boqolkiiba sannadkan.
Sanduuqa wax lagu maamulo ee Chernstal's Guernsey wuxuu maalgelin doonaa 10 ilaa 12 shirkadood oo adduunka ah oo ku leh saamiyada, curaarta iyo curaarta la beddeli karo, nooc deyn isku jira ah.
Baahida loo qabo xashiishadda waxay ku dhowdahay 344 bilyan oo doollar adduunka oo dhan inta badanna wali si sharci darro ah ayaa looga ganacsadaa, sida lagu sheegay warbixin sanadkii hore ay soo saareen koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Washington oo lagu magacaabo New Frontier Data.
Si kastaba ha noqotee, maalgashadayaal badan ayaa ku sharfaya sharciyeynta federaalka ee xashiishadda Mareykanka sanadaha soo socda. In kabadan 10 gobol ayaa horey sharci uga dhigey dadka waaweyn iney cabaan xashiishad la'aan warqad dhaqtar.
Xashiishadda dawada ah, oo hadda uun lagu tijaabiyo tijaabooyinka caafimaad, ayaa horeba loogu qoray dalal badan si loogu daweeyo xaalado kala duwan sida suuxdin, walaac iyo xanuun. Tani waxay sidoo kale khuseysaa Boqortooyada Ingiriiska, halkaas oo xashiishka caafimaadka laga sharciyeeyay laba sano ka hor.
Xeer ilaaliyaha maaliyadeed ee Boqortooyada Midowday ayaa usbuucii la soo dhaafay soo saaray tilmaamo cusub oo loogu talagalay shirkadaha doonaya inay liis gareeyaan suuqa saamiyada ee London, iyagoo albaabada u furay kuwa keenaya alaabada adeegsiga caafimaadka.
Ilo ay ka mid yihiin CannabisLaw (EN), FT (EN), Koodhadhka Teknolojiyada (EN)
saamiyadamaalgelintacannabisCBDsaliid cbdEuropamaaliyad ahaanlacagBoqortooyada Ingiriiska
Xashiishad sharci ah Nepal? Waxay noqon kartaa oo kaliya...
Dowladda hoose ayaa diiday codsiga 'Coffeeshop New Style'...
Caddaynta ugu horraysa ee cabidda xashiishadda...